फूल जस्तै जीवन - Diaspora - ONUF - Overseas Nepali Unity Forum - International Committee::Web Magazine
लानु के छ र मरी?
फूल जस्तै जीवन,
ओइलिएर जान्छ झरी।
यस्तै छ रित यो सृष्टीको
यही नै हो महाभ्रम दृष्टिको।
फुली फुल्ने दिन
हावाको हर झोक्कामा
झुली झुल्ने दिन
यही नै हो
गतिशील जगतले ल्याउने
महामोंग (महा उमंग)
कहिल्यै नआउने भोलिको आशमा
के चिन्ता गर्छौ?
किन हुन्छौ निराश?
को बोकी लाग्छ कुल्लो कटेरो?
मसान घाटको बासमा?
यही नै हो महासत्य।
जे छ आज
जे छ तिमीसँग
बुझ न बुझ
सुन्दर तिम्रो जीवन बुझ।
किन गर्छौ रिस, डाहा, घृणा र घमण्ड
चितामा जल्नु नै त छ एक दिन
तब आफै जल्छौ आज किन?
माया र ममताले
शान्ति र सन्तोषले
ओइलिएर झर्दा पनि
उर्वर पारी धर्ती
नयाँ पिँढीको लागि
छोडी जाऊ यही गुण
कोही नपरोस् कहीँ रून।